फागुन १९, काठमाडौं। चाैतर्फी विराेधका बाबजुद सरकारले बालाजु बाइपासमा डोजर चलाउन छाेडेकाे छैन । सर्वाेच्च अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै केही स्थानीयकाे उठिबास लगाएकाे सरकारले बाक्लो संंख्यामा प्रहरी परिचालन गरी आज पनि डाेजर चलाएकाे हाे । डोजरसँगै बाटो बनाउने अरु मेसिनहरू पनि ल्याइएको छ । प्रहरीले विरोध गर्ने स्थानीयवासीलाई पक्रेर हिरासतमा राख्नेदेखि […]
संसद पुनर्स्थापनाको खुसियालीःमाइतीघरमा दीप प्रज्वलन (फोटोफिचर)
फागुन ११,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै काठमाडौंको शान्तिवाटिका र माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्ज्वलन गरिएको छ । हेरौ फोटोफिचर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको खुसियालीमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूह निकट अनेरास्ववियु, कांग्रेस निकट नेविसंघ, विवेकशील […]
माघ २६,काठमाडौं । प्रतिनिधसभा बिघटनको कदम प्रतिगमनकारी भन्दै जनयुद्ध तथा बिभिन्न आन्दोलनका शहीद तथा बेपत्ता परिवारले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रतिमगन सच्चिनुपर्ने मागसहित सोमवार काठमाडौंको माइतीघरदेखि निकालिएको र्याली नयाँ बानेश्वरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएका थियो । शहीद तथा बेपत्ता योद्धा परिवार, बागमतीले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा शहीद तथा […]
मनै लोभ्याउने आकर्षक २० तस्वीरः फोटोफिचर
काठमाडौं : प्रकृतिको अनुपम उपहार छ नेपाल। हिउँदको महिना जाडो अनि सुन्दर र शान्त वातावरण। नेपालका अधिकां‌स ठाउँ निकै मनमोहक देखिन्छन्। खुलेका हिमाल प्रकृतिका अनुपम उपहार ताल र फाँट निकै खुलेका छन्। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले विभिन्न ठाउँबाट स‌ंकलन गरेका तस्‍वीरहरू : ​ ​
धनगढी, १७ माघ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल समूहले शनिबार कैलालीको धनगढीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ सोडारीका अनुसार धनगढीमा हुने शक्ति प्रदर्शनमा ५० हजार भन्दा बढी कार्यकर्ता सहभागी भएका छन् । सभालाई नेकपा अध्यक्षद्धय प्रचण्ड […]
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकमा दाहाल-नेपालः फोटोफिचर
माघ १८,काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले माइतीघर मण्डलमा धर्ना कार्यक्रम गरेको छ । माघ १४ गतेदेखि जारी धर्ना कार्यक्रममा आइतबार अध्यक्षद्वय दाहाल-नेपाललगायतका नेता कार्यकर्ता सहभागी भएका छन् ।धर्नामा नेकपाका शीर्ष नेतासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरु सहभागी भएका छन् । यसअघि […]
तारुकाको गोरु जुधाईः फोटोफिचर
१ माघ, काठमाडौं । बिगतका बर्षहरुमा जस्तै यस बर्षको माघे संक्रान्तिको अवसरमा पनि नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–३, तारुकामा गोरु जुधाइएको छ । यसबर्ष गोरु जुधाउने स्थानमा लैजाने वेला एउटा गोरु भीडतिर भागेपछि दर्शकको भागाभाग भएको थियो । त्यसक्रममा तीन जना घाइते समेत भएका छन् ।
रङ बदल्ने र एकैचोटी दुईतिर हेर्न सक्ने जीव छेपारो ।
भाइबहिनीहरु तिमीहरुलाई छेपारोको बारेमा थाहा छ होइन ? ल भन त छेपारो के का लागि चिनिन्छ ? अंग्रेजीमा Chameleon (केमिलियोन) भनिने छेपारोका १७१ प्रजाति पाइन्छन् संसारभरि। प्रजातिमा विविधता जस्तै यिनको आकारमा पनि बड़ो विविधता हुन्छ। इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिकामा उल्लेख भए अनुसार ‘पर्सन्स’ ( parson’s ) प्रजातिको छेपारो २७ इन्च अर्थात ६९ […]